Web Design: Ọ bụghị banyere gị | Martech Zone
You na - achọ iweta nnukwu mkpokọta weghachite? Kedu maka iwughachi ngwa ngwanrọ ahụ dị oke egwu ma dị oke egwu? Tupu ị banye na mmiri, cheta na onye ikpeazụ ga - ekwusi ike, ọ bụghị gị, ọ bụ ndị ọrụ gị. Ndị a bụ usoro ole na ole iji ghọtakwuo mkpa ha na omume ha tupu i jiri dollar mmemme ọ bụla dị oke ọnụ ahịa:
Mee nyocha nke onye ọrụ gị
Malite na data ọ bụla dị iche iche, dị ka nchịkọta, na ị ga-ahụrịrị ihe ndị ọrụ gị na - eme (ma ọ bụ na ha anaghị eme). Maka nghọta ọzọ, ịnwere ike ịnwale onye ọrụ saịtị ma ọ bụ ngwanrọ dị ugbu a iji jiri anya gị hụ ihe na-atọ gị ụtọ na ihe na-ewute ndị ọrụ gị. Soro ndị ọrụ ibe gị kwurịta okwu na ahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa iji mụta nsogbu ndị ọrụ ugbu a na-adịgide adịgide. Ọbụna ma ọ bụrụ na data nyocha a adịworị na akụkọ na ebe, wepụta oge iji kwurịta okwu. Ọmịiko ahụ sitere n’ezie mkparịta ụka nke ya na ndị mmadụ n'ime olulu ga-akwadebe gị iji mee mkpebi ndị ọzọ maka ime ihe na mkpebi mmepe.
Mee ihe nnabata
N'ezie, mee nke ahụ ihe omuma (otutu)? ọ dịghị onye na-emepụta ụdị zuru oke na nnwale mbụ. Mana nke ahụ bụ echiche ahụ: ịda ngwa ngwa, dị ka ọnụ ala, yana oge ọ bụla enwere ike ịmara na itele ọ bụla na-eme ka ị bịarukwuo nsoro ngwọta bara uru. O doro anya na ị nwere ike iji HTML ma ọ bụ Flash rụpụta ezigbo ihe ngosi, mana Acrobat, Powerpoint, yana akwụkwọ na pensụl ka bụ ngwaọrụ magburu onwe ya iji mee ka echiche gị bụrụ nke a na-ahụ anya. N'ime ime nke a, ị nwere ike ịkọwa okwu, ịtụle, ma nwalee echiche gị. Na-ekwu maka ule?
Nnwale onye ọrụ
Mgbe ụfọdụ ndị na-eche maka ịnwale ndị ọrụ, ha na-eche ụdị uwe ime ụlọ na kọlọtọ dị ọcha. N’ụzọ dị mwute, ọtụtụ na-echekwa igbu oge na mmefu ndị ọzọ. Mgbe a manyere gị ịhọrọ nke a ma ọ nweghị nnwale onye ọrụ ọ bụla, ọtụtụ na-ahọrọ nke ikpeazụ. N'ihi ihere! Na oru ndi pere mpe ma obu ndi nwere oge ojoo, were uzo agha: chota ndi oru 6 rue 10, ndi nne na nna, di na nwunye, ndi agbata obi (onye di njikere inye aka) ma lelee ha anya n'otu n'otu ka ha mezuru otu ma obu abuo kachasi mkpa na mbido gị. Nke a agaghị enye gị nghọta niile ma ọ bụ akụkọ dị mma nke nyocha nke eji eme ihe na-enye, mana ịnwale naanị otu onye dị 100% karịa karịa ịnwale onye ọ bụla. Nsonaazụ ndị a nwere ike iju gị anya ma ọ bụ mebie gị, mana ka ịmara ihe ndị a ugbu a karịa mgbe emechara ọrụ ahụ.
Nhazi ziri ezi
Ọ bụ eziokwu na anyị bụ mmadụ na-enwe mmasị na ihe na-egbu maramara. Na teknụzụ, a na-ahụta ihu dị iche iche dị mfe karịa ndị na-abụghị ndị echepụtara. Nke a apụtaghị na ọrụ gị kwesịrị ịbụ asọmpi ịma mma. Dịka ọmụmaatụ, cheedị ma ọ bụrụ na imepụta ihuenyo Google jiri onyonyo bara ụba na ngbanwe ihuenyo dị ukwuu. Ezie na nke a nwere ike na-adọrọ adọrọ na ọnọdụ ọzọ, ọ ga-abụ nsogbu zuru oke na nyocha ọchụchọ. Maka Google, na ọtụtụ ndị ọzọ, kachasị mara mma ihuenyo imewe bụ mgbe mfe.
Ọ bara uru
Anyị maara nke ọma nrụgide na ọrụ ọhụrụ iji mee ngwa ngwa banye ọrụ na-ewu ihe. Ọ bụ ihe nwute mgbe usoro dị ka nyocha onye ọrụ, prototyping, yana ule onye ọrụ bụ ihe izizi ị ga-aga mgbe mmefu ego na usoro iheomume ga-esiwanye ike. Ihe isi ike bụ na ndị a ga-abụkarị zọpụta oge na ego na ogologo oge, ma mechaa gbochie gị ibughachi naanị ọdịdị dị mma nke ihe anaghị arụ ọrụ.
Tags: designahụmahụ onye ọrụnjirimara interface interfaceuxweb imewe
Jul 23, 2009 na 9:41 PM
Jul 23, 2009 na 10:35 PM
Abụghị Dougy! Ọ bụ enyi anyị Jon Arnold dere akwụkwọ a na Tuitive - ụlọ ọrụ mara mma nke dị n'obodo ahụ bụ ọkachamara maka iwulite atụmatụ weebụ dị egwu nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ.
Jul 24, 2009 na 2:54 PM
Nke ahụ ekwesịghị ịbụ oke siri ike iji gbanwee ngwa mgbakwunye.
Jul 24, 2009 na 3:16 PM
Ugbua na-arụ ọrụ na ya, Dave! Zitere m Verizon Ikuku blackberry